सपनामा माछा मारेको देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्
ramkrishna April 14, 2021	सपनामा माछा मारेको देख्नु
१. सपनामा माछा मारेको देख्नु / सानो माछा देख्नु भएमा:
माछालाई देवताको प्रतिक समेत मान्ने गरिन्छ। यदि सपनामा सपनामा माछा मारेको देख्नु, सानो माछा पकाएको वा खाएको देख्नुभएमा यसको मतलब तपाईलाई आकस्मिक धन लाभ हुनुको साथै सुख प्राप्ति हुने गर्छ।
३. आफूलाई मृत अवस्थामा देख्नु भएमा:
Previous Previous post: सपनामा बिबाह गरेको देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्
Next Next post: सपनामा पानी देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्